၂၀၂၁ ခုနစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ မှစမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
Zapya (“၀န်ဆောင်မှု”) သည် cross-platform ဖိုင်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည့် tools ကို ထောက်ပံ့ထားသည်။ Zapya သည် Dewmobile, Inc (“Dewmobile”, ” ကျွန်တော်တို့”,” ကျွန်ုပ်တို့”) ၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေတို့၏ privacy အလွန်အရေးကြီးကြောင်း နှင့် မိတ်ဆွေတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ကာကွယ်ရမည်ကို Dewmobile မှ သိထားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သည့်အခါတိုင်း၊ ဖိုင်များကို လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ကျွန်တော်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုတွင် အကြောင်းအရာများကို တင်သည့်အခါတိုင်း ကျွန်တော်တို့မှ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ဆောင်မှု နှင့်မသက်ဆိုင်သော(သို့) မိတ်ဆွေနှင့်သက်ဆိုင်သော မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆို ကျွန်တော်တို့မှ စုဆောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် အောက်ပါအချက်အလက်အမျိုးအစားများကိုသာစုဆောင်းမည်ဖြစ်သည်။
ပရိုဖိုင်အချက်အလက် (avatar image, nickname နှင့် သူငယ်ချင်း List များ)
Chat History (စာဝှက်ထားတဲ့ chat history မပါဝင်ပါ)
File Transfer History (ပြောင်းရွှေ့ထားသော ဖိုင်နာမည်နှင့်device များ)
ကိုယ်ရေးမဟုတ်သော အချက်အလက်များ (phone IMEI number, phone model, rom, phone operator, location, operation system, etc.)
မိတ်ဆွေနှင့် Dewmobile ကြားဆက်သွယ်မှုများ (emails, mail, feedback, etc.)
မိတ်ဆွေတို့သည် ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွင် အ‌ကြောင်းအရာများကို တင်ရန်နှင့် User Content များကို ဝန်ဆောင်မှုတွင် ထည့်သွင်းထားသော user များ(“သူငယ်ချင်း”) နှင့် မျှဝေရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့မှ မိတ်ဆွေတို့အား ပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေးထားသည်ကို ကျွန်တော်တို့၀န်ဆောင်မှု၏ ပရိုဖိုင်စာမျက်နှာ ကိုသုံးခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေတို့ မှနားလည်သဘောတူထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှု၏ ပရိုဖိုင်စာမျက်နှာပေါ်တွင် မိတ်ဆွေတင်ထားသော User Content များကို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများမှ ကြည့်နိုင်၊ စုဆောင်းနိုင်၊ အသုံးပြုနိုင်သည်။ User Content အဖြစ်တင်ရန် ရွေးချယ်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် များအတွက် မိတ်ဆွေတာ၀န်ယူရမည်။ အခြားတစ်စုံတစ်ဦးမှ စုဆောင်းအသုံးပြုခဲ့လျှင် ကျွန်တော်တို့တွင် တာ၀န်မရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ မျှ‌ဝေခြင်းမပြုရန် နှင့် မိတ်ဆွေတို့ ပရိုဖိုင်တင်ရာတွင် သတိပြုရန် ကျွန်တော်တို့ တိုက်တွန်းချင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုများကို မိုဘိုင်းကိရိယာတွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုသောအခါ ကျွန်တော်တို့သည် မိတ်ဆွေ၏ device ပေါ်တွင် “device identifier” ကို ဝင်ရောက်ခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း နှင့် (သို့မဟုတ်) သိမ်းဆည်းခြင်းများ လုပ်ရမည်။ Device identifiers ဆိုသည်မှာ မိတ်ဆွေ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် သိမ်းဆည်းထားသော(သို့)ဆက်စပ်သော သေးငယ်သည့်ဒေတာဖိုင်များ (သို့) အလားတူ‌‌ဒေတာဖွဲ့စည်းပုံ များဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေ၏ မိုဘိုင်းကိရိယာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုသို့ဝင်ရောက်သည့်အချိန်တိုင်း ယခင်မက်ဆေ့ချ်များကို ဖတ်နိုင်ရန် နှင့် မတော်တဆဖျက်မိသော မက်ဆေ့ချ်များကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန် မိတ်ဆွေတို့၏ chat history ကို ကျွန်တော်တို့ သိမ်းထားသည်။ သို့သော် မိတ်ဆွေတို့၏ privacy ကိုအလေးထားသည့်အတွက် စာဝှက်ထားသော chat history ကို ကျွန်တော်တို့ သိမ်းဆည်းမည် မဟုတ်ပါ။ စာလက်ခံသူ မက်ဆေ့ချ် ကို ဖတ်ပြီး၊ စာဝှက်ထားသော chat မှ ထွက်သွားသည် နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင် စာဝှက်ထားသော chat history သည် အလိုအလျောက် ပျက်သွားလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်မှုသို့ဝင်ရောက်သည့်အချိန်တိုင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုသုံးပြီး ပေးပို့သော(သို့)လက်ခံသော ဖိုင်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဖိုင်လွှဲပြောင်းမှုမှတ်တမ်းကို ကျွန်တော်တို့ သိမ်းဆည်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏၀န်ဆောင်မှု မှတောင်းဆိုသော ခွင့်ပြုချက်အားလုံးသည် အက်ပလီကေးရှင်းမှ ပေးသော လုပ်ဆောင်ချက် များနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်သည်။ ကျွန်တော်တို့၀န်ဆောင်မှု မှလိုအပ်သောခွင့်ပြုချက် အချို့သည် Google Play နှင့် Apple ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် အထိခိုက်မခံသော သတင်းအချက်အလက် မူဝါဒများမှ ထိန်းချုပ် ထားသည်။ မိတ်ဆွေတို့အား ဤခွင့်ပြုချက်များ တောင်းခံရန် Google Play နှင့် Apple ထံမှ ကျွန်တော်တို့ ခွင့်ပြု ချက်ရရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ဤခွင့်ပြုချက်များထည့်သွင်းရန် ကျွန်တော်တို့တွင် ခွင့်ပြုချက်မရှိပါက ကျွန်တော်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုသည် သူတို့၏ app store တွင်စာရင်းဝင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုသည် ဘာကြောင့် ခွင့်ပြုချက်များကို လိုအပ်သလဲဆိုတာကို ဤမူဝါဒ၏ နောက်ဆက်တွဲအပိုင်းတွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြချက်ကို ရှာတွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှု ပုံမှန်လည်ပတ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်များ ကို ၃ မျိုး ခွဲခြားထားသည်။ Android ခွင့်ပြုချက်များ၊ iOS ခွင့်ပြုချက်များ၊ ဖုန်းပွားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောခွင့်ပြုချက်များ ဖြစ်သည်။ တောင်းဆိုထားသောခွင့်ပြုချက်များကို ရယူခွင့်မပြုသောကြောင့် ၎င်းခွင့်ပြုချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သော အင်္ဂါရပ်များသည် ပုံမှန် လည်ပတ်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း သိပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Android iOS Phone Replication
Location Location SMS
Photos Photos Call Log
Sign in ဝင်ရန်မလိုပဲ မိတ်ဆွေအချက်အလက် များကို ရယူရန် ကူညီခြင်း
မတော်တဆဖျက်မှုကို ကာကွယ်ရန် အချက်အလက်များကို မှတ်ထားခြင်း
ကျွန်တော်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို Personalize ပြုလုပ်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုများ၏ လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ခြင်း
မိတ်ဆွေတို့ထံမှ ကျွန်တော်တို့စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကို third-party များသို့ ကျွန်တော်တို့ ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းခြင်းများ လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ မိတ်ဆွေတို့၏အချက်အလက်များကို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့် third-party data analytics software development kit (“SDK”) ကိုသာမျှဝေသည်။ သို့သော် မိတ်ဆွေသုငယ်ချင်းနှင့် third-party သို့မျှဝေသော အချက်အလက်များမှာ မတူညီပါ။
ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွင် အခြား user ကိုသူငယ်ချင်းများအဖြစ် ထည့်ပြီးသည်နှင့် မိတ်ဆွေ၏ nicknameနှင့် avatar ၊ ပရိုဖိုင်တွင် တင်ထားသော user content နှင့် ချက်တင်စကားပြောရန် သူငယ်ချင်းများထံပေးပို့သမျှ ကိုရယူနိုင်သည်။ မည်သည့်အချက်အလက်ကို ဝန်ဆောင်မှုတွင် တင်ရန် နှင့် ပေးပို့ရန် မိတ်ဆွေတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိသည်။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေသည် ဝန်ဆောင်မှုများမှ အချက်အလက်များကို ပယ်ဖျက်လျှင် မိတ်ဆွေ၏ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးသည် screenshot ရိုက်ခြင်း(သို့) အချက်အလက်များကို ကူးယူထားနိုင်သည်ကို သတိထားပေးပါ။
ကျွန်တော်တို့သည် traffic တိုင်းတာရန် အတွက်သာ SDK နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဟုတ်သော အချက်အလက်များကို မျှဝေသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မိတ်ဆွေ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဟုတ်သော အချက်အလက်နှင့် အခြား user များ၏ အချက်အလက်များကို မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မှတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုမရှိစေရန် စုဆောင်း အသုံးပြုပါသည်။ SDK သည်ကျွန်တော်တို့အား အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးပြီး user များ၏ အပြုအမူ နှင့် ၀န်ဆောင်မှု၏လုပ်ဆောင်ပုံတို့ကို ပိုမိုနားလည်ရန်လည်း ကူညီသည်။
မိတ်ဆွေ၏အချက်အလက်များကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်မလဲ။
မိတ်ဆွေ၏ privacy သည်ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့နှင့်မျှဝေသော အချက်အလက်များကို မိတ်ဆွေထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကို သေချာသိစေလိုသည်။ လတ်တလောတွင် မိတ်ဆွေ၏ အချက်အလက်များ ထိန်းချုပ်ရန် ကျွန်တော်တို့မှ အောက်ပါနည်းလမ်းများကို provide လုပ်ထားပါသည်။ ထို့ပြင် နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုများ မိတ်ဆွေကို ပေးရန် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
အကယ်၍ မိတ်ဆွေသည် Moments အပိုင်းတွင် တင်ထားသော user content၊ သူငယ်ချင်းစာရင်း၊ chat history နှင့်ဖိုင်လွှဲပြောင်းမှုမှတ်တမ်းများ ဖျက်လိုပါက ဝန်ဆောင်မှုရှိ “Settings”ကိုသွားပြီး “Delete Account”ကိုရွေးပါ။ တောင်းဆိုမှုကို ပေးပို့ပြီးနောက် ခုနစ်ရက်အတွင်း အက်ပလီကေးရှင်းကို မဖွင့်ရန် သေချာအောင် လုပ်ပါ။ မိတ်ဆွေ၏ Account ကိုရပ်ဆိုင်းရန် တောင်းဆိုပြီးနောက် စိတ်ပြောင်းခဲ့သည်ရှိသော် ကျွန်တော်တို့မှ မိတ်ဆွေ၏ Account အချက်အလက်များကို ခုနစ်ရက် ထားရှိပေးမည် ဖြစ်သည်။ ဤခုနစ်ရက် ကြာပြီးသည့်နောက်တွင် မိတ်ဆွေ၏ အချက်အလက်အားလုံးကို အပြီးဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
မိတ်ဆွေသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၊ မိုဘိုင်းစက်၏ “Settings”ကိုသွားပြီး ဝန်ဆောင်မှု မှ အသုံးပြု သော ခွင့်ပြုချက်များ ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေသည် ခွင့်ပြုချက် အချို့ ကို ပိတ်ထားလျှင် ဝန်ဆောင်မှု၏ အချို့သောအင်္ဂါရပ်များသည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ နားလည်ပေးပါ။
မိတ်ဆွေ ၏ အချက်အလက်များ လုံခြုံမှုကို ကျွန်တော်တို့မှ အလွန်စိုးရိမ်ပါသည်။ အစောပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စုဆောင်းမည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ စုဆောင်းထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် ကျွန်တော်တို့မှ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ စီမံမှုများကို အသုံးပြုထားသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် personal (သို့) sensitive ဖြစ်သော user များအတွက် HTTPS ကိုအခြေခံ၍ ခေတ်မှီသော စာဝှက်စနစ်နည်းပညာကိုသုံး၍ backend server သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်။
မိတ်ဆွေ ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန် ကျွန်တော်တို့ ပြုလုပ်ထားသော လုံခြုံရေး စီမံများအရ မိတ်ဆွေ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မဟုတ်သော အချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက် ခြင်း(သို့)အသုံးပြုခြင်းကို တားဆီးမည်ဟု ကျွန်တော်တို့မှ အာမခံထားခြင်း လုံးဝမရှိကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားသိရှိပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုများ တွင် မိတ်ဆွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး sensitive ဖြစ်သော အချက်အလက်များကို မဝေငှရန် တိုက်တွန်းပါရစေ။ အရေးကြီးသည့် မိတ်ဆွေ တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွန်တော်တို့ထံ မပေးပို့ရန်နှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု မှတဆင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ (ဥပမာအားဖြင့် လူမျိုး၊ လူမျိုးစုနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်၊ နိုင်ငံရေးအမြင်များ၊ ဘာသာရေး(သို့)အခြားယုံကြည်မှုများ၊ ကျန်းမာရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရာဇ ၀တ်မှု နောက်ခံ (သို့)အဖွဲ့အစည်းများ။
ကျွန်တော်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုသည် အသက်၁၃နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်း မဟုတ် ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် user များထံမှ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ ကောက်ခံထားခြင်းမရှိသော်လည်း ၁၆နှစ် အရွယ်ကလေးများ သည် ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပါက မိဘ(သို့) အုပ်ထိန်းသူ များမှ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲမှု နှင့်သဘောတူခွင့်ပြုချက်များ ရယူပေးရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ user များ၏ privacy ကို လေးစားသည့်အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည် user များ၏ အသက်အရွယ်ကို verify မလုပ်နိုင် ပါဘူး။ သို့သော် မိတ်ဆွေသည် မိဘ(သို့) အုပ်ထိန်းသူဖြစ်ပြီး ကလေး၏ အကောင့်ကို ဖျက်လိုပါက ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေ၏တောင်းဆိုချက်ကို မလုပ်ဆောင်မီကျွန်တော်တို့သည် မိတ်ဆွေအား verify လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကို နားလည်ပေးပါ။
California၏ Consumer Privacy အက်ဥပဒေအရ ကယ်လီဖိုးနီးယား user များသည် ကျွန်တော်တို့ ကောက်ယူထားသော၊ အသုံးပြုထားသော (သို့)ထုတ်ဝေခြင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မိတ်ဆွေမှ ကျွန်တော်တို့အား ဖော်ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက် များကို ဖျက်သိမ်းရန် မိတ်ဆွေတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤအခွင့်အ‌ရေးများကို ကျင့်သုံးသော မိတ်ဆွေအား ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုရ။ မိတ်ဆွေ၏အခွင့်အ‌ရေးများကျင့်သုံးလိုပါက ကျေးဇူးပြူ၍ feedback@dewmobile.net သို့ဆက်သွယ်ပေးပါ။ မိတ်ဆွေ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကာကွယ်ရန်နှင့် ကျွန်တော် တို့ဝန်ဆောင်မှု ပြည့်ဝစေရန် မိတ်ဆွေ၏တောင်းဆိုချက်ကို မလုပ်ဆောင်မီကျွန်တော်တို့သည် မိတ်ဆွေအား verify လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
European Union နှင့် Switzerland တွင်နေထိုင်သူများ
အီးယူအထွေထွေ အချက်အလက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်‌ရေးစည်းမျဉ်း (GDPR)အရ အီးယူ နိုင်ငံသား များသည် ကုမ္ဗဏီမှ ကောက်ယူသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ရယူပိုင်ခွင့်၊ ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင် ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း စသည့်အခွင့်အရေးများရှိသည်။ မိတ်ဆွေ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်များကို ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုလည်း မိတ်ဆွေ အားပြောပြခွင့်ရှိသည်။ feedback@dewmobile.net သို့ဆက်သွယ်၍ မိတ်ဆွေ၏အခွင့်အ‌ရေးများကို သုံးနိုင်သည်။ မိတ်ဆွေ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကာကွယ်ရန်နှင့် ကျွန်တော် တို့ဝန်ဆောင်မှု ပြည့်ဝစေရန် မိတ်ဆွေ၏တောင်းဆိုချက်ကို မလုပ်ဆောင်မီကျွန်တော်တို့သည် မိတ်ဆွေအား verify လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
မိတ်ဆွေ အား အချိန်မီ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးရန် ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ အတက်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားသွားပါမည်။ အမြန် ဖြေကြားလိုပါက ကျွန်တော်တို့ထံ အင်္ဂလိပ်(သို့)တရုတ်ဘာသာဖြင့် အီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါသည်။
Zapya ၏ Android version အတွက် လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်များကို အောက်တွင်အသေးစိတ် ဖော်ပြထား ပါသည်။
ဖုန်းစက်ကိရိယာ၏ နီးစပ်ရာ တည်နေရာ နှင့် သက်ဆိုင်သော ခွင့်ပြုချက်များအတွက် အသုံးပြုသည်။ ဤ ခွင့်ပြုချက်သည် ဝန်ဆောင်မှု ကို Wi-Fi Hotspot နှင့်/(သို့)Bluetooth ကို ဖွင့်ရန် ခွင့်ပြုသည်။ ဆက်သွယ်မှုများ ကို တောင်းဆိုခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုများကိုလက်ခံခြင်း နှင့် ဒေတာများကိုလွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် ဤခွင့်ပြုချက် လိုအပ် သည်။ ဤခွင့်ပြုချက်ကိုပိတ်ထားပါက ဖိုင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း လုပ်ဆောင်မှုသည် အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဤဝန်ဆောင်မှု မှ user ၏ GPS ကိုသြဒီနိတ်များကို မသိမ်းဆည်း ထားပါ။
စက်အတွင်းရှိ photo gallery သို့ သိမ်းဆည်းခြင်း(သို့) ဝင်ရှာကြည့်ခြင်း နှင့်ဆက်စပ်သော ခွင့်ပြုချက် တွင် အသုံးပြုသည်။ ဤခွင့်ပြုချက်သည် ၀န်ဆောင်မှုအား စက်မှ ပုံများကို ချက်တင်သို့ပို့ရန်(သို့) user ၏ avatar ပုံ အဖြစ်ထားရန် ခွင့်ပြုသည်။
ကင်မရာသို့ဝင်ခြင်း(သို့) ဖုန်းမှဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း(သို့) ဗွီဒီယို ရိုက်ခြင်း နှင့်ဆက်စပ်သော ခွင့်ပြုချက်တွင် အသုံးပြုသည်။ ဝန်ဆောင်မှုမှ ဖုန်းကင်မရာနှင့်ပတ်သက်သော အချက်၃ ချက်ကို ထောက်ပံ့ရန် ခွင့်ပြုပေးထားပါ သည်။
၁။ စက်နှစ်ခုကြား ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်မှု ပိုမြန်စေရန် QR code ကို scan ဖတ်ပေးပါ။ ထိုသို့ sacn ဖတ်ခြင်းဖြင့် စကားဝှက် ရိုက်ဖြည့်ခြင်းအဆင့်ကို ကျော်နိုင်ပါသည်။
၂။ ချိတ်ဆက်ထားသည့် group တွင် ကင်မရာအင်္ဂါရပ်တခုအနေဖြင့် ဓာတ်ပုံများကို စက်တခုမှ အခြားစက် တခုသို့ ရွေ့ပြောင်းခြင်း(သို့) ရိုက်ကူးခြင်း လုပ်နိုင်ပါသည်။
၃။ user စုထားသောဓာတ်ပုံများနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်၍postတင်ခြင်း( သို့) user ၏ avatar အဖြစ်လည်း ထားနိုင်ပါသည်။
အက်ပလီကေးရှင်းကို external storage သို့ ဖတ်ရန်နှင့်ရေးရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်များကို သုံးသည်။ ဤ ခွင့်ပြုချက်သည် ၀န်ဆောင်မှုအား external storage ရှိ မည်သည့်ဖိုင်ကိုမဆို ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာ- SD Card သည် ဖိုင်များ transfer လုပ်ခြင်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ user အနေဖြင့် ကူးပြောင်းလိုသောဖိုင်ကို ရွေးချယ်၍ အက်ပလီကေးရှင်း မှ create လုပ်ပေးသည့် wireless connection မှ တဆင့်ပေးပို့နိုင်သည်။ user သည် wireless connection မှ တဆင့် internal storage(သို့) external storage သို့ ကူးယူထားသောဖိုင်များကို သိမ်းဆည်းရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ user သည် in-app settings မှ external storage သို့ သိမ်းရန်ရွေးချယ်ရမည်။ ဤခွင့်ပြုချက်ကို ပိတ်ထားပါက user များသည် ၀န်ဆောင်မှုတွင်ဖိုင်များကို upload (သို့) ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ မရပါ။
စက်၏ဖုန်းနံပါတ်၊ လက်ရှိ cellular ကွန်ယက်အချက်အလက်၊ လက်ရှိဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၏ အခြေအနေနှင့် ဖုန်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ဖုန်းအကောင့်များအပါအဝင် phone state ကို အက်ပလီကေးရှင်းအား ဖတ်ရန် ဤခွင့်ပြုချက် ကို သုံးသည်။ အကောင့်သည် မိုဘိုင်းစက်နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်စေရန်အတွက် ၀န်ဆောင်မှုမှ ဤခွင့်ပြုချက် ကိုအသုံးပြု သည်။ ဤခွင့်ပြုချက်မရပါက user များသည် ၀န်ဆောင်မှုတွင်ရှိသည့် မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် မိတ်ဆွေကြိုးစားသောအခါ ဝန်ဆောင်မှုသည် အခြားစက်များနှင့် WiFi Hotspot အမည်၊ စကားဝှက်များကို မျှဝေရန် Google OS မှဤခွင့်ပြုချက် လိုအပ်သည်။
Contact များဖတ်ရန် နှင့် contact များကို device ထဲသို့ သိမ်းရန် အက်ပလီကေးရှင်းအား ခွင့်ပြုရန်အတွက် သုံးသည်။ user ၏ contact များကိုအက်ပလီကေးရှင်းသို့တင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုမှ ဤခွင့်ပြုချက် ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့မှသာ user သည် သူတို့နှင့် အတူ အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ချိတ်ဆက် နိုင်ပြီး user သည် အခြားသူများနှင့် contact အချက်အလက်များကို မျှဝေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် မိတ်ဆွေကြိုးစားသောအခါ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အခြားကိရိယာများနှင့် WiFi Hotspot အမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုမျှဝေရန်ဂူဂဲလ် operating system အတွက်ဒီခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
Zapya ၏ iOS version အတွက် လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်များကို အောက်တွင်အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါသည်။
အက်ပလီကေးရှင်း ကို ဖုန်းစက်ကိရိယာ၏ နီးစပ်ရာ တည်နေရာ သို့ ရွှေ့ရန် ခွင့်ပြုချက် အတွက် အသုံးပြုသည်။ စက်ကိရိယာ၏ မီဒီယာလက်လှမ်းမှီထိန်းချုပ်မှု(MAC) လိပ်စာကို ထုတ်ယူရန် ဝန်ဆောင်မှုမှ ဤခွင့်ပြုချက်ကို အသုံးပြုသည်။ စက်၏ MAC လိပ်စာဆိုသည်မှာ user ၏ account ကို ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက် ပေးသည့် တခုတည်းသောစက်အမှတ်အသားပင်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုမှ user ၏ GPS ကိုသြဒီနိတ်များကို သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ဝင်ရှာကြည့်ခြင်းများ လုပ်လို့မရပါ။
စက်အတွင်းရှိ photo gallery သို့ သိမ်းဆည်းခြင်း(သို့) ဝင်ရှာကြည့်ခြင်း နှင့်ဆက်စပ်သော ခွင့်ပြုချက် တွင် အသုံးပြုသည်။ ဝန်ဆောင်မှုသည် ဓာတ်ပုံကို စက်မှ user ၏စုဆောင်းမှုသို့ upload တင်ရန် (သို့) user ၏ avatar အဖြစ်ထားခြင်း ကိုခွင့်ပြုသည်။
iOS စက်ကိရိယာရှိ bluetooth အင်္ဂါရပ်ကို စတင်လုပ်ဆောင်စေရန်နှင့် ဆက်စပ်သော ခွင့်ပြုချက် တွင်အသုံးပြုသည်။ user ၏ဖုန်းနှင့် အခြားသူတပါး၏ ဖုန်းကြား ဆက်သွယ်မှု ခိုင်နိုင်ရန် ဤခွင့်ပြုချက် မှ ဝန်ဆောင်မှုအား bluetooth သုံးခြင်းကို လက်ခံထားသည်။ အကယ်၍ ဤခွင့်ပြုချက် မရခဲ့လျှင် Shake to Connect အင်္ဂါရပ်ကို user များ သုံးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Contact ကိုဖတ်ရန် နှင့် စက်ထဲသို့သိမ်းဆည်းရန် အက်ပလီကေးရှင်းကို လက်ခံသည့် ခွင့်ပြုချက်များတွင် အသုံးပြုသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းသို့ user ၏ contact များကို upload တင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု မှ ဤခွင့်ပြုချက်ကို အသုံးပြုသည်။ သို့မှသာ user များသည် အက်ပလီကေးရှင်းတွင် အခြားသူများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး အခြားသူများအား contact အချက်အလက်ကိုပါ မျှဝေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းပွားခြင်း လုပ်ဆောင်မှုအချက်ကို သုံးရာတွင် SMS နှင့် Call Log သို့ဝင်ရန် ဘာကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုမှ ခွင့်ပြုချက်များတောင်းဆိုရသလဲကို အောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်-
SMS ကို user ၏ SMS စာတိုများ နှင့်ဆက်စပ်သော ခွင့်ပြုချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ Google play မှ ဤခွင့်ပြုချက်များကို အန္တရာယ်ကြီးမားသော(သို့) သတိထားရသော ခွင့်ပြုချက်များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပြီး Google play မှခွင့်ပြုထားသော app များသာ ၎င်းတို့၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Google play ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် မလိုက်လျောသော app များကို အလိုအလျောက် ဖြုတ်ချလိမ့်မည်။ user များသည် ၎င်းတို့၏ ဖုန်းများရှိအကြောင်းအရာများကို အရန် ကူးခြင်း၊ ဖုန်းတွင်းရှိအကြောင်းအရာများကို ပြန်ယူခြင်း နှင့် device မျိုးစုံမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုချိန်ကိုက်ရန် ဤခွင့်ပြုချက်သို့ ဝင်ရှာကြည့်ရန် ၀န်ဆောင်မှုလိုအပ်သည်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းသည် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှု အင်္ဂါရပ်နှင့် ဆက်စပ်သော ခွင့်ပြုချက်များ အတွက်အသုံးပြုသည်။ Google play မှ ဤခွင့်ပြုချက်များကို အန္တရာယ်ကြီးမားသော(သို့) သတိထားရသော ခွင့်ပြုချက်များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပြီး Google play မှခွင့်ပြုထားသော app များသာ ၎င်းတို့၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Google play ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် မလိုက်လျောသော app များကို အလိုအလျောက် ဖြုတ်ချလိမ့်မည်။ user များသည် ၎င်းတို့၏ ဖုန်းများရှိအကြောင်းအရာများကို အရန် ကူးခြင်း၊ ဖုန်းတွင်းရှိအကြောင်းအရာများကို ပြန်ယူခြင်း နှင့် device မျိုးစုံမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုချိန်ကိုက်ရန် ဤခွင့်ပြုချက်သို့ ဝင်ရှာကြည့်ရန် ၀န်ဆောင်မှုလိုအပ်သည်။